WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood): waxaa qoray; Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood): waxaa qoray; Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood): waxaa qoray; Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
16/03/2017	686 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misna Qoraa ah.
Markii beerihii laga baxay oo cabbaar la socday ayuu Shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka, si isdabajoog ahna u yeershay Hoonka. Dadkii oo dhan ayey dhiillo ku abuurtay.
Qof waliba wuxuu is yiri bal hubso waxa hakiyay baabuurka. Waxay arkeen jidkii oo lo’ iyo Geel fara badanu ku gudban yihiin. Waxaa lasoo galay meel bulsho xoola dhaqata ah ay naq ka degtay. Dhulku waa doog iyo biyo dhax yaal. Midabbada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaad ka ah ee Ilaahey dalsan kaas ku beeray. Laamo cargeeyay oo caleemu ku gaafan tahay, ubaxna guudka ku sita ayuu geed waliba la liicayaa.
Ragga iyo Dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan, waxay isku maaweelinayaan lagdan iyo cayaaro Hidde. Qaarkoodna meelo kala fogfog ayey koox koox ugu sheekeysanayaan. Warsame ayaa markuu arkay geelii oo iskugu jira Irmaan iyo horweyn, Aaran iyo galoof is celin waayey, markaasuu ku dhuftay heesta Geela, isagoo ku luuqeynaya oo yiri:
“Geel nimaan dhaqan
Goodir xalay dhalay
Gaarka kala gelin
Naaso godol qaba
Gaddoon kala dhihin
Gaatan ula socon
Geed qabow tegin
Waa gob yaa yiri?”.
Markuu Warsame heestii dhameeyay, ayey dadkii baabuurka saarraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo. Warsame way la xumaatay inuu isla heestii kusoo celiyo mar labaad. Maxaa yeelay, waa nin korka ka haya sugaan fara badan. Isla markiiba wuxuu dadkii u dooray gabaygii Cumar Isteeliya oo ahaa:
“Meeshiyo awaw iyo awaw, Xaawa iyo Aadan
Arligeenna xoolahani way, ku isirraayeene
Adduun se lama sinne ,geel horaa leysu aaminaye
Waa waxay abaartuu dhaqdeen, odayadeenniiye
Haddii oofaweynow ratiga, eyro lagu qooqsho
Aminkheyrka galabtii hadduu ,aaran soo didiyo
Usha kol iyo laba jeer haddaad, yara ogeysiiso
Umalkii uu qabay doob hadduu, owda kaga siiyo
Indhalaliska miciduu, sidii aar u raminaayo
Kolna waxaan adduun kale lahayn, aabi socodkaase”
Si weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay, qarkoodna waxayba wada jir ugu luuqeeyeen beyda ugu dambeeya oo ah:
“ Kolna waxaan adduun kale lahayn,aabi socodkaase”
Intaan uu Warsame gabayga tirinayay, dadkuna sida xiisa leh uga jiibinayey, waxaa caro bistiis la ahaa oo faruurta ruugayay wiilkii Dhaanraac ahaa. Wuxuu diiddan yahay sheekada aan asaga macnaha u lahayn ee Odayaashu la neef neefsanayaan. Si uu isaga aamusiyo ayuu Dhaanraac u shitay Makiinadda suxuunta wareejisa. Wuxuu saaray Saxan ay ku duuban yihiin heesihii Jeemis Brawn. Odayaashii sheekadu u socotay ayaa mar kaliya wada aamusay, oo yaab isla wada dhugtay.
Farxaddii odayaasha waxaa baddalay foolkaduud, markaasey il careysan kuwada fiirinayaan Dhaanraac, asaguna dan kama leh waxaas oo dhan. Wuxuu ka cayaarayaa fadhigiisa oo hadba gees isku tuurayaa, jilbahana isku tumayaa. Mar mar heesaaga ayuu kula luuqeynayaa beydadka iyo hoorisyada qaarkood. “Sida, Jirobba……jirobba …..!.”
Eyro: waa magac loo bixiyo hasha la jecelyahay ama loo bixiyo geela oo dhan.
Aminkhayr: waa waqtiga casar gaabka ah oo xoolihii sooftaanka ku kala baahsanaa leysku soo duwayo La soco Qeybta 4-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Xarig-jiidka loogu jiro xilalka xukuumadda cusub (Xog muhiim ah)
Next: Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa dagaal xalay ka dhacay Muqdisho